ခရီးသြား , July 07, 2020
အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီ(၁/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၇-၇ -၂၀၂၀ ရက်နေ.နေ.လည် ၁ နာရီမှာ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Source – U Phyo Min...
ခရီးသြား , July 06, 2020
ဂန့်ဂေါ- ကလေး ရထား ပြန်လည်ပြေးဆွဲမည် ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေသည့်ကာလအတွင်း ဧပြီလလယ်မှစ၍ ဂန့်ဂေါ- ကလေး ရထား ခရီးစဉ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ရာ အဆိုပါ ရထားခရီးစဉ်ကို ဇူလိုင် ၇ ရက်မှစတင်၍ ပြန်လည်၍...
ခရီးသြား , July 04, 2020
ပုဂံဒေသရှိဘုရားများ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖွင့်​ပေးလိုက်တာကြောင့် ဘုရားဖူးတွေနဲ့ ပြန်စည်ကား ပုဂံ-ညောင်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါစတင်ကာ ကွယ်ထိန်းချုပ်ချိန်မှစတင်ကာ လာရောက်လည်ပတ်သည့်ဘုရားဖူးဧည့်သည် မရှိခဲ့ရာမှ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်းတစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ...
ဖားကန့်ဒေသ အပါအဝင် လုံးခင်း၊ ခန္တီးနှင့် မော်လူး၊ မော်ဟန် ရတနာနယ်မြေများ အတွင်း ကျောက်စိမ်း တူးဖော်မှု သုံးလ ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန်ကြား
ခရီးသြား , July 03, 2020
ဖားကန့်ဒေသ အပါအဝင် လုံးခင်း၊ ခန္တီးနှင့် မော်လူး၊ မော်ဟန် ရတနာနယ်မြေများ အတွင်း ကျောက်စိမ်း တူးဖော်မှု သုံးလ ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန်ကြား နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃ မိုးရာသီ ကာလအတွင်း ဖားကန့်ဒေသ အပါအဝင်...
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဇင်းကျိုက်ရှိ ရန်ကုန် – မော်လမြိုင်လမ်းရေကျော်
ခရီးသြား , July 01, 2020
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဇင်းကျိုက်ရှိ ရန်ကုန် – မော်လမြိုင်လမ်းရေကျော်။ ၁.၇.၂၀၂၀ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ဇင်းကျိုက်မြို့တွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးတွင် ရေကျော်နေပါတယ်။ အဲဒီရေကျော်နေတဲ့ ကားလမ်းတလျောက်မှာ ပေါင်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် သွားရောက်ကူညီ...
ရန်ကုန်-ဥက္ကံ RBEရထားကို ယနေ့ ဇူလိုင်(၁)ရက်နေ့မှစ၍ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
ရန်ကုန်-ဥက္ကံ RBEရထားကို ယနေ့ ဇူလိုင်(၁)ရက်နေ့မှစ၍ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ရန်ကုန်မှဥက္ကံသို့ ပြေးဆွဲနေသော အမှတ်၆၅အဆန်၊ ၆၆အစုန် RBE ရထားကို (၁.၇.၂၀၂၀) နေ့မှစ၍ ယခင်အချိန်စာရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်(၆၆) အစုန်ရထားသည် ဥက္ကံဘူတာမှ...
၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ
ခရီးသြား , June 30, 2020
( ၃၀-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
( ၃၀-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့မီးရထား လမ်းပိုင်းတစ်ပိုင်းစီ တွင် ရထားတစ်စင်းစီတိုးချဲ့ ပြေးဆွဲမည် COVID-19 ရောဂါ နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေလျှော့မှုများဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဇွန် ၁၆ ရက် မှစ၍ မြန်မာ့မီးရထား လမ်းပိုင်းတစ်ပိုင်းစီတွင် ရထားတစ်စင်းစီတိုးချဲ့ ပြေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊...
ဂျပန်လူမျိုး ODA စီမံကိန်းတာဝန်ခံ အရာရှိများ ANA ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဥ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ
ဂျပန်လူမျိုး ODA စီမံကိန်းတာဝန်ခံ အရာရှိများ ANA ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဥ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ODA စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာနှင့် တာဝန်ခံအရာရှိ ၂၀ ဦးသည်...